Archive du 20170609
Zazarano nariana teny Besarety Voasambotra ilay reniny
Zava-doza tsy fampiseho masoandro indray no nitranga tetsy Mahavoky Besarety omaly vao mangiran-dratsy tokony ho tamin’ny 6 ora.
Hery Rajaonarimampianina Tany Zambia indray no nitady vola
Fotoana fohy taorian'ny nahatongavan’ny filohan’ny Repoblika Malagasy Hery Rajaonarimampianina tao Lusaka ny 7 jona, dia noraisin’ny filoha Zambianina Edgar Lungu izy.
Fitsinjaram-pahefana Ilaina havaozina ny lalàna tamin’ny taona 1960
Lasa tsy mpanara-dalàna avokoa ny ben’ny tanàna noho ny tsy fananana «valeurs fiduciaires» mazava tsara eo anivon’ny «Imprimerie nationale», hoy ny filohan’ny AMGVM (Association des Maires des Grandes Villes de Madagascar) Razanakolona Raoul.
CENI Tokony hofoanana, hoy ny CRAM
Ilaina harovana tsara ireo dingana fanomanana ny fifidianana manoloana ny fitanilana, ny hosoka na koa ny kajikajy avy amin’ny mpitondra fanjakana, hoy ny CRAM (Cercle de Réflexion pour l’Avenir de Madagascar).
Kaominina ambonivohitra Toamasina Misy mpiasa iray tena mampitaraina ny maro
Misy mpiasa iray tena mampitaraina ny maro tokoa eo anivon’ny kaominina ambonivohitr’i Toamasina amin’izao fotoana izao.
Andrekaky o ! Fa inona indray ity nafitsokareo ry Jean a ? Talanjona sy sanganehana mihitsy ny rehetra nahita hoe resaka lalàna sy ho avin’ny firenena ve r’ise no resahina sy nolaniana dia 15 monja no mba tonga teny an-dapanareo.
Hentitra ny SMM “Tsy hilefitra intsony izahay”
Notsiahivin’ny filohan’ny Sendikan’ny Mpitsara (SMM) nandritra ny fivahinianany tamina onjam-peo iray omaly fa ny praiminisitra no nanao fanambarana maneho fiarovana ny olona namoahana didy fanagadrana.
Boriborintany faha-6 Hampahafantatra ny maha izy azy
Hikarakara varavarana misokatra entina hampahafantarana ny faritra misy azy ny Boriborintany fahenina, tarihin’ny delege Fehizoro Andriamananjezika ny 16 sy ny 17 jona ho avy izao.
Kaominina Ilafy Hisy fihazana olona
Sambany teto Madagasikara no hisy itony karazan-dalao hihazana olona na ilay antsoina amin’ny teny vahiny hoe « Chasse à l’homme » itony.
Mitokona ny sendikan’ny mpiasan’ny minisiteran’ny vola sy ny tetibola izay avokavoky ny fitsinjarana ireo vola fampandehanana ny raharaham-pirenena sy ny ain’ireo « mpiasam-bahoaka ».
Hopitalin’ny reny sy ny zaza Tsaralalana Hahazo « eau vive » 600 isam-bolana avy amin’ny Star
Famaritana ny karamam-panjakana Samy mody fanina ny sendika sy ny minisitera
Samy mahay milalao ny tandrify azy, raha izay no azo ilazana azy, ny avy eo anivon’ny fivondronamben’ireo sendikan’ny mpiasam-panjakana eto amintsika sy ny avy eo anivon’ny minisiteran’ny vola sy ny tetibola. Taratra io nandritry ny famelabelaran-kevitra izay niseharan’ny avy eo anivon’ny Transparency international sy ireo voakasika mivantana amin’ity savoro eo
Orinasa Fanalamanga Misy resaka manjavozavo ny fitantanana
Mampanontany tena ny maro ankehitriny ny fomba fitantanan-draharaha eo anivon’ny Orinasa Fanalamanga na Fanjarian’Ala Ambatondrazaka, Moramanga ao Tsirinala ao Moramanga izay heverin’ny rehetra fa misy zavatra manjavozavo be ihany.
Niakatra ny sandan’ny vola vahiny Euro nanomboka tamin’ity herinandro ity. Manomboka mampitaintaina ny mpahay toe-karena izany, indrindra raha hampifandraisina amin’ny fanontàna vola 20.000 ariary tokana izay efa tsy ho ela intsony.